Imidlalo Yebhodi Engcono Kakhulu engama-44 Yezingane Ngeminyaka yobudala | Nginike isikhathi sokuphumula
Isaka | 17/12/2021 17:48 | Kubuyekezwe ku- 21/12/2021 09:01 | General
Lapho ukhetha i- imidlalo yebhodi ehlekisayo yezingane, izici eziningana okufanele zicatshangelwe. Ngakolunye uhlangothi, iminyaka efanele leyo geyimu yakhelwe yona. Omunye umbuzo ngothi uzodlala yedwa yini noma nezinye izingane noma uzodlala nabazali bakhe noma abantu abadala njengoba kukhona imidlalo yebhodi eyenzelwe wonke umuntu. Futhi-ke, uma umdlalo uyi-didactic ngaphezu kokuzijabulisa, kungcono kakhulu.
Kulo mhlahlandlela uzoba nazo zonke izinto ozidingayo khetha okuhle kakhulu imidlalo yebhodi yezingane, ngaphezu kokuba nesigaba esikhethekile semidlalo yebhodi lezemfundo. Enye indlela enempilo nengokwenhlalo eyengeziwe yama-consoles nemidlalo yevidiyo. Baze belulekwa ochwepheshe ekuthuthukiseni ingane, ngoba bahlakulela amakhono amahle emoto, ukubuka, umbono wendawo, ukugxila, umcabango nokudala, ukwenza izinqumo, njll. Ngaphandle kokungabaza isipho esikhulu ...
1 Imidlalo yebhodi ethengiswa kakhulu yezingane
1.2 UMagilano SKYJO
2 Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yezingane ngeminyaka
2.1 Ezinganeni ezisukela eminyakeni engu-2 kuya kwengu-3 ubudala
2.1.1 I-Goula Izingulube Ezi-3 Ezincane
2.1.2 I-Diset ngiyifunda ngezithombe
2.1.3 BEAN Adela inyosi
2.1.4 IBEAN Izithelo Zokuqala
2.1.5 I-Falomir Spike Pirate
2.2 Ezinganeni ezisukela eminyakeni engu-4 kuya kwengu-5 ubudala
2.2.1 Ungavuki baba!
2.2.2 Hasbro Inkani
2.2.3 I-Hasbro Sloppy Plumber
2.2.4 UGoliyathi Anton Zampon
2.2.5 UGoliyathi Emihlathini
2.2.6 I-Diset Party & Co Disney
2.2.7 I-Hasbro Scooper
2.2.8 I-Hasbro Crocodile Toothpick
2.2.9 ULúlido Grabolo Jr.
2.2.10 Ngingubani uFalomir?
2.3 Imidlalo yebhodi yezingane eziphakathi kweminyaka engu-6 nengu-12 ubudala
2.3.1 IHasbro Monopoly Fortnite
2.3.3 I-Trivial Pursuit Dragon Ball
2.3.5 I-Devir The Magic Labyrinth
2.3.6 Inqaba yokwesaba
2.3.7 Iphathi ye-Diset & Co Junior
2.3.8 Ukusebenza kweHasbro
2.3.9 Hasbro Ubani?
2.4 Imidlalo yebhodi yezemfundo
2.4.1 Indlu yesipoki
2.4.2 Isicupho sethempeli
2.4.3 Inunu yombala
2.5 Imidlalo yebhodi yezingane kanye nabantu abadala
2.5.1 Iphazili elingu-500
2.5.2 Indida ye-3D Yohlelo Lwelanga
2.5.3 Ithebula lemidlalo eminingi
2.5.4 I-Mattel Scrabble Original
2.5.5 I-Mattel Pictionary
2.5.7 Uhambo lokuqala
2.5.8 Izimpawu ze-Hasbro
3 Umhlahlandlela wokuthenga umdlalo webhodi wezingane
3.1 Ubuncane obuncane obunconywayo
3.4 Ukuphatheka nokuhleleka
Imidlalo yebhodi ethengiswa kakhulu yezingane
Phakathi kwabathengisi abahamba phambili, noma imidlalo yebhodi yezingane ethengiswa kakhulu futhi ephumelelayo, bekulelo zinga lokuthengisa ngezizathu ezisobala. Yizona ezithandwa kakhulu, futhi ezaziwa kakhulu, ngakho-ke kufanele zigqanyiswe ngokukhethekile:
Imidlalo ye-Tranjis - Virus! -...
Ingenye ethengiswa kakhulu, futhi ayiyona encane. Umdlalo wabadlali abangu-2, kusukela eminyakeni engu-8 ubudala futhi ulungele wonke umndeni. Kuyalutha futhi kumnandi kakhulu, kulula ukuyihambisa, futhi lapho kuzodingeka ubhekane negciwane elikhishwe. Qhudelana ukugwema ubhubhane futhi ube ngowokuqala ukuqeda amagciwane ngokuhlukanisa umzimba onempilo ukuvimbela ukusabalala kwezifo ezimbi.
Ungomunye wemidlalo yebhodi yamakhadi eqondile yabancane nabadala. Idlalwa ngokushintshana nangemizuliswano, ngejika elilula lokufunda ukuze ukwazi ukudlala kusukela ekuqaleni. Ngaphezu kwalokho, futhi inengxenye yokufundisa, enezinombolo ezifika kweziyi-100 ezinamadijithi angu-2 ukuzijwayeza ukubala, nokubala ukuhlola amathuba.
I-Zygomatic - Dobble -...
Kusukela eminyakeni engu-6 futhi unalo omunye umdlalo phakathi kwabathengisi abahamba phambili. Umdlalo webhodi okahle wawo wonke umuntu, ikakhulukazi wamaphathi. Kuzodingeka ubonise amakhono wejubane, ukubuka kanye nokukhalipha, ukuthola izimpawu ezifanayo. Ngaphezu kwalokho, ifaka phakathi imidlalo emi-5 eyengeziwe.
I-Libellud Dixit yangempela -...
Ingadlalwa kusukela eminyakeni eyi-8, futhi ingaba ngeyomndeni wonke futhi. Amakhophi angaphezu kwezigidi ezingu-1.5 athengisiwe kanye nemiklomelo eminingana yamazwe ngamazwe amakhadi okubiza alo mdlalo. Udumo lwakhe lufanelekile. Inamakhadi angama-84 anemifanekiso emihle, okufanele uyichaze ukuze ozakwenu akwazi ukuyiqagela, kodwa ngaphandle kokuthi abanye abamelene nabo bakwenze lokho.
Kusukela eminyakeni engu-6 unalo mdlalo webhodi ukuze uthuthukise i-reflexes kanye ne-acuity ebonakalayo, okungukuthi, ukuba yi-lynx. Kuhlanganisa izinhlobo eziningi zokudlala, kufanele uthole izithombe zakho ebhodini ngaphambili futhi uthole inani eliphezulu lamathayela ngangokunokwenzeka.
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yezingane ngeminyaka
Ukukusiza ungene abakhethiwe, uma kubhekwa inani elikhulu lemidlalo yebhodi yezingane ekhona. Zikhona zayo yonke iminyaka nako konke okuthandwayo, izingqikithi, uchungechunge lwamakhathuni, omndeni wonke, njll. Lapha unezigaba ezimbalwa ezihlukaniswa ngobudala noma itimu:
Ezinganeni ezisukela eminyakeni engu-2 kuya kwengu-3 ubudala
Lona omunye wemigqa ebucayi kakhulu, njengoba kungewona nje noma yimuphi umdlalo webhodi ojwayele lezi zingane, futhi kufanele kuqashelwe ngokukhethekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi ziphephile. Isibonelo, kufanele ziphephe, zingabi nezingxenye ezincane ezingagwinywa, noma zibukhali, futhi okuqukethwe nezinga kufanele kube ekuphakameni kwalezi ezincane. Ngakolunye uhlangothi, kufanele futhi bahlangabezane nezici ezithile ezinjengokugqama ngokubukeka, ukulula, ukugxila ekuthuthukiseni amakhono afana namakhono emoto, amakhono okubuka, njll. Abanye izincomo ezivumelekile zemidlalo yebhodi yezingane ezisuka eminyakeni emi-2 kuye kweyesi-3 Yilezi:
I-Goula Izingulube Ezi-3 Ezincane
I-Goula- Umdlalo we-3 ...
Inganekwane edumile ethi The 3 Little Pigs yaphenduka umdlalo webhodi wabancane. Ngokunokwenzeka ukudlala kwimodi yokubambisana noma yokuncintisana. Ingadlalwa ngabadlali aba-1 kuye kwaba-4, futhi isebenzela ukuthuthukisa amanani ahlukene. Ngokuqondene nomgomo, kukhona ibhodi elinochungechunge lwama-tile, indlu encane, futhi kuzodingeka bathathe amathayili anoma iyiphi ingulube endlini ngaphambi kokuba impisi ifike.
Thenga Izingulube Ezintathu
I-Diset ngiyifunda ngezithombe
I-Diset - I-Lectron ngiyafunda ...
Omunye umdlalo wokufundisa wezingane ezineminyaka engu-3 ubudala ozama ukuhlobanisa imibuzo nezimpendulo. Bazojabula ngenkathi bethuthukisa amakhono afana namakhono okubuka, ukuhlukaniswa kobumo, imibala, njll. Inamakhadi anezihloko ezihlukahlukene kanye nesistimu yokuzilungisa ukuze ingane ihlole ukuthi uphendule kahle yini ngenxa yepensela eliwumlingo elikhanyisayo futhi likhiphe umsindo.
Thenga ngifunda ngezithombe
BEAN Adela inyosi
I-Maya inyosi akuyona yodwa edumile. Manje kufika lo mdlalo webhodi omangalisayo wezingane ezineminyaka engu-2 ubudala. I-Adela inyosi, ezodonsa ukunaka kwezingane ezincane ngombala wayo futhi ngenhloso yokuqoqa umpe ezimbalini futhi ziyise esidlekeni futhi ngaleyo ndlela zikwazi ukwenza uju. Lapho ibhodwe lezinyosi seligcwele, uyawina. Indlela yokuqinisa umuzwa wobunye, ukuqonda nokufunda imibala.
Thenga u-Adela the Bee
IBEAN Izithelo Zokuqala
Imidlalo ye-HABA: Okokuqala ...
Umdlalo wezingane ezineminyaka emi-2. Ukutholwa kwe-classic, efana ne-El Frutal, kodwa eyenzelwe abancane, ukulungisa imithetho kubo nokwenza lula ifomethi. Indlela yokuthuthukisa amakhono amahle emoto nokubambisana, njengoba kufanele uwine ndawonye, ​​futhi ngenxa yalokhu kuzodingeka ushaye igwababa, okungafanele lidle isithelo.
Thenga Isithelo sokuqala
I-Falomir Spike Pirate
Falomir- Chofoza Isigebengu ...
Lona omunye wemidlalo ehlekisayo yezingane ezineminyaka engu-3 ubudala. Inesisekelo lapho izobeka khona umgqomo, lapho kuzokwethulwa khona isigebengu futhi kungeke kwaziwe ukuthi uzogxuma nini. Kuqukethe ukushayela izinkemba emgqonyeni ngokushintshana, futhi owokuqala ukwenza i-pirate gxuma izowina.
Thenga i-Pirate Pin
Ezinganeni ezisukela eminyakeni engu-4 kuya kwengu-5 ubudala
Uma izingane sezikhulile, imidlalo yezingane ezincane izoba eyezingane kakhulu futhi isidina. Badinga imidlalo ethile egxile ekuthuthukiseni ezinye izinhlobo zamakhono, njengokucabanga kwamasu, ukugxilisa ingqondo, inkumbulo, njll. Labo izingane ezineminyaka engaba ngu-5, ungathola imidlalo yebhodi ethokozisayo yezingane emakethe:
Umdlalo othokozisayo wezingane ezineminyaka engu-5 ubudala lapho kumele bajikeleze isondo le-roulette futhi badlulele phambili. Kodwa kuzomele benze isinyenyela, phela ubaba ulele embhedeni uma ubanga umsindo uzomvusa akulalise (ubuyela esigcawini sokuqala ebhodini).
Thenga Ungavuki baba
I-Hasbro Gaming 48380B09 ...
Kungumdlalo webhodi owenzelwe izingane ezineminyaka engu-4 ubudala. Imbongolo egobile kakhulu ekhahlela futhi ijikijela yonke imithwalo, lapho ikhahlela, kugijime inhlanhla, konke okubeke kuyo kugxumela emoyeni. Lo mdlalo unamazinga angu-3 obunzima: owaqalayo, ophakathi nendawo futhi othuthukile. Kuhlanganisa ukupakisha izinto phezu kwesihlalo sembongolo ngokushintshana.
I-Hasbro Sloppy Plumber
I-Hasbro Gaming - Umdlalo ...
Lo mdlali osebenza ngamapayipi uyinkunzi enkulu, uyi-bungler, futhi uyazabalaza. Abancane kuzodingeka babeke amathuluzi ebhande ngokushintshana futhi ithuluzi ngalinye lizokwenza ukuthi amabhulukwe awele kancane. Uma ibhulukwe lakho liwa ngokuphelele, amanzi azochaphaza. Ongamanzisi abanye bazowina.
Thenga i-Sloppy Plumber
UGoliyathi Anton Zampon
UGoliyathi - Anton Zampon, ...
Le ngulube encane enhle okuthiwa u-Antón Zampón izovivinya amakhono abancane. Umdlalo olula ozohlanganisa ukuphakela umlingisi kuze kuqhume ibhulukwe. Bangadlala ngokushintshana kwabadlali abangu-1 kuye kwabayisi-6, bezijabulisa ngokubheka ukuthi bangaki ama-hamburger abangawadla ...
Thenga u-Antón Zampon
UGoliyathi Udla imihlathi...
Lona omunye umdlalo webhodi wezingane, lapho ungazijwayeza ukudoba okujabulisayo kakhulu. I-tuburon ilambile, futhi igwinye izinhlanzi eziningi ezincane okuzodingeka uzigcine ngokuzikhipha emlonyeni wayo ngenduku yokudoba. Kodwa qaphela, ngoba nganoma isiphi isikhathi ushaka uzoluma. Ubani ezinye izilwane ongazisindisa kuzoba nguye ophumelelayo.
I-Diset Party & Co Disney
I-Diset- Party & Co Disney ...
Le Party isifikile, eyenzelwe ngokukhethekile izingane ezineminyaka engu-4 ubudala, futhi inetimu ye-Disney. Umdlalo webhodi wezinhlaka eziningi ongafunda ngawo futhi ujabule. Isetshenziselwa wonke umndeni, ukwazi ukuphumelela izivivinyo eziningana ukuze uthole izibalo zabalingiswa befektri eqanjiwe. Ukuhlolwa kufana nePhathi yabantu abadala, ngokuhlolwa kokulingisa, ukudweba, njll.
Thenga Iphathi & Co
I-Hasbro Gaming- Isikhala Sebhola ...
I-classic engaphumi esitayeleni. Amakhulu namakhulu ezikhangiso zethelevishini ezisondela kuKhisimusi noma ngezinye izikhathi lapho ukuthengiswa kwamathoyizi kwenyuswa. Umdlalo webhodi wabancane lapho izimvubu ezilawulwa abadlali abane kufanele zigwinye wonke amabhola angaba khona. Othola amabhola amaningi uzowina.
Thenga Ball Slot
I-Hasbro Crocodile Toothpick
I-Hasbro Gaming-Crocodile ...
Le ngwenya iyisiminzi, kodwa ngenxa yokudla kakhulu amazinyo ayo awekho kahle futhi idinga ukuhlolwa kwamazinyo. Khipha ama-molar amaningi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuba umlomo uvale, njengoba uzobe usulitholile izinyo elilimaza le ngwenya enobungane. Omunye umdlalo olula okhuthaza ubuciko kanye nokuhamba okuhle kwabancane.
Thenga I-Sucker Ngwenya
ULúlido Grabolo Jr.
Junior Grabolo, ngiyadlala...
Umdlalo webhodi wokufundisa ojabulisayo wabancane abasendlini. Inamandla kakhulu futhi ikuvumela ukuthi uthuthukise amakhono engqondo, ukubuka, ukucabanga, nokugxila. Kulula ukuyiqonda, umane ugoqe idayisi futhi kufanele uthole inhlanganisela ephume phakathi kwamakhadi. Ivumela imidlalo esheshayo futhi ingalungela ukuthatha uhambo.
Thenga i-Grabolo Jr
Umdlalo webhodi ojabulisayo ongaba intandokazi, ngisho nomuntu omdala ongawudlala. Kuyasiza ukuthuthukisa ulwazimagama oluhlobene nokuhweba, ngokusekelwa kwekhanda lapho ungabeka khona ikhadi elibonwa yibo bonke abantu ngaphandle kwakho, futhi kuzodingeka ubuze imibuzo ukuze uzame ukuqagela ukuthi ubani umlingiswa ovela ekhadini. Lo mdlalo ulungele ukuthuthukisa amakhono emoto, ubuhlakani nezinzwa.
Imidlalo yebhodi yezingane eziphakathi kweminyaka engu-6 nengu-12 ubudala
Okweqembu lobudala elifakiwe phakathi kweminyaka emi-6 nengu-12Kukhona nemidlalo yebhodi engajwayelekile ehlangabezana nezidingo zalolu banga lobudala. Lezi zinhlobo zama-athikili ngokuvamile zinezinselele eziyinkimbinkimbi, futhi zethula ukukhushulwa kwamakhono njengenkumbulo, amaqhinga, ingqondo, ukugxilisa ingqondo, ukuma, njll. Phakathi kwezinhle kakhulu kukhona:
IHasbro Monopoly Fortnite
I-Monopoly Fortnite (Hasbro ...
I-Classic Monopoly ihlale ifana nempumelelo, futhi ayilokothi iphume esitayeleni. Manje sekuza inguqulo evuselelwe ngokuphelele ngokususelwa kumdlalo wevidiyo weFortnite. Ngakho-ke, ngeke kusekelwe enanini lomcebo abadlali abawuzuzayo, kodwa inani lesikhathi abasilawulayo ukuze baphile kumephu noma ebhodini.
Yebo, umdlalo wevidiyo odumile wokuqamba nokusinda iMinecraft nawo usufinyelele emhlabeni wemidlalo yebhodi. Umdlali ngamunye uzoba nomlingiswa wakhe, futhi aqoqe inani lamabhulokhi wensiza. Umqondo uwukulwa nezidalwa zomhlaba ngamunye. Owinile uzoba ngowokuqala ukuqedela ibhodi ngama-chips abo.
I-Trivial Pursuit Dragon Ball
Ungacabanga ukuhlanganisa ubumnandi bomdlalo we-Trivial Pursuit trivia odumile nomkhathi we-anime we-Dragon Ball. Manje usunakho konke kulo mdlalo ngesamba semibuzo engama-600 mayelana nesaga esidumile ukuze ukwazi ukukhombisa ulwazi lwakho ngabalingiswa obathandayo.
Ubudala be-Cluedo: Kusukela ku-8 ...
Kubulawe ngendlela engaqondakali. Kunabasolwa abayisi-6, futhi kuzodingeka udlule endaweni yesigameko ukuze uthole izinkomba ezikuholela kumbulali. Phenya, ufihle, usole futhi uphumelele. Omunye wemidlalo engcono kakhulu yokucabanga kanye nozungu emakethe.
I-Devir The Magic Labyrinth
I-Devir The Labyrinth ...
Uma uthanda izimfihlakalo ezithusayo, lona umdlalo wakho webhodi. Umdlalo olula lapho kufanele udlule ku-maze engaqondakali ukuze uzame ukuthola izinto ezilahlekile. Kuzodingeka ukhombise ukuqina ukuze uzame ukuphuma nezinto futhi udlule emaphaseji e-labyrinth ugwema iziphazamiso ezahlukene ozozithola.
Thenga I-Magic Labyrinth
The Castle of Terror The...
I-Atom Games ithuthukise lo mdlalo webhodi ojabulisayo ngendlela eyesabekayo, onamakhadi angama-62 anezinhlamvu nezinto ezinyantisayo. Ngazo ungadlala ngezindlela ezihlukahlukene (njengomphenyi, imodi yesivinini, nenye inkumbulo), ukuthuthukisa amakhono abancane endlini.
Thenga The Castle of Terror
Iphathi ye-Diset & Co Junior
I-Diset - Iphathi Yegeyimu & nabanye ...
Enye inguqulo yomdlalo webhodi weParty & Co odumile wezingane. Uzokwazi ukwakha amaqembu futhi ujabule ukuze uphumelele izivivinyo ezahlukene. Owokuqala ukufinyelela isikwele sokugcina uzowina. Ukuze wenze lokhu, kufanele uphumelele ukuhlolwa kokudweba, umculo, ukuthinta, izincazelo, imibuzo, njll.
Umdlalo we-Hasbro Gaming ...
Enye yakudala, igeyimu esabalale emhlabeni wonke futhi ehlola ubuciko nolwazi lwe-anatomical lwabadlali. Isiguli siyagula futhi sidinga ukuhlinzwa, sikhishwe izingxenye ezihlukene. Kodwa qaphela, udinga ukushaya kwenhliziyo kadokotela ohlinzayo, ngoba uma izingcezu zithinta izindonga ikhala lakho lizokhanya futhi uzobe ulahlekelwe… Futhi uma uthanda ama-minion, kukhona futhi inguqulo enalaba balingisi.
Hasbro Gaming ngubani,...
Esinye sezihloko ezaziwa yibo bonke. Ibhodi elilodwa kumuntu ngamunye lapho kukhona uchungechunge lwezinhlamvu ezinezimpawu. Inhloso ukuqagela umlingiswa ongaqondakali wesitha ngokubuza imibuzo nokulahla izinhlamvu ezingahambisani nemikhondo akunika yona.
Imidlalo yebhodi yezemfundo
Kukhona imidlalo yebhodi yezingane engagcini nje ngokujabulisayo, kodwa futhi Ziyafundisa, ngakho zizofunda ngokudlala. Indlela yokuqinisa ukufunda kwesikole ngaphandle kokubandakanya umsebenzi oyisicefe noma oyisicefe kubo, futhi engaba nokuqukethwe kwesiko elijwayelekile, izibalo, ulimi, izilimi, njll. Okuhamba phambili kulesi sigaba yilezi:
Umdlalo wephazili ojabulisayo wokuthuthukisa umbono wendawo, ukuxazulula izinkinga, ingqondo enezinselele zamaleveli ahlukene, nokugxilisa ingqondo. Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuthuthukisa amakhono okuqonda nokucabanga okuguquguqukayo nge-gamification.
Thenga Indlu Yezipoki
I-Temple Trap - Smart ...
Lo mdlalo webhodi lezemfundo uthuthukisa ukucabanga, ukucabanga okuguquguqukayo, umbono obonakalayo, nokugxilisa ingqondo. Unamazinga amaningana obunzima ongakhetha kuwo, nezinselelo ezihlukene ezingama-60. Indida lapho ikhono lengqondo lizoba ukhiye ekudlaleni.
Thenga Isicupho Sethempeli
Inunu yombala, ...
Igeyimu yebhodi yezemfundo emangazayo lapho abadlali behamba ngemibala emele imizwa noma imizwa, okwenza kube uhlobo lokufunda ngokomzwelo ezinganeni eziphakathi kweminyaka emi-3 nengu-6 ubudala. Okuthile okuvame ukulibaleka ezikoleni futhi okubalulekile empilweni yabo yengqondo nobuhlobo nabanye.
Thenga Color izilo
Umdlalo oklanyelwe izingane ezineminyaka engaphezu kwengu-4 ubudala futhi ohlose ukuthuthukisa amakhono olimi ngesiNgisi neSpanishi. Ukwenza lokhu, sebenzisa uchungechunge lwamakhadi anezithombe namagama okuzodingeka ahlobane ukuze aqondanise kahle.
I-Safari, Umdlalo we ...
Umdlalo lapho wonke umndeni ungabamba iqhaza, futhi lapho abancane bezofunda ngezilwane kanye nezwe. Ngezilwane nemiyalo efinyelela kwezingama-72 ngezilimi eziyi-7 (iSpanishi, isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiNtaliyane, isiDashi nesiPutukezi).
Imidlalo yebhodi yezingane kanye nabantu abadala
Ungathola futhi imidlalo yebhodi yezingane ingane engadlala ngayo ephelezelwa umuntu omdala, kungaba umama, ubaba, ugogo nomkhulu, izingane zakini, njll. Indlela yokunakekela encane yendlu futhi uhlanganyele emidlalweni yabo, into ebalulekile kubo futhi nakubantu abadala, ngoba ikuvumela ukuba uchithe isikhathi esiningi futhi ubazi kangcono kancane. Impela lapho sebekhulile ngeke bazikhohlwe lezo zikhathi ozichithe nemidlalo efana nalena:
Indida yezingcezu ezingama-500 ...
Indida eneziqephu ezingu-500 enetimu yomhlaba weSuper Mario Odyssey World Traveller. Indlela yokwakha njengomndeni, elungele izingane ezisukela eminyakeni eyi-10. Uma isihlanganisiwe, inobukhulu obungu-19 × 28.5 × 3.5 cm.
Indida ye-3D Yohlelo Lwelanga
I-Ravensburger - I-Puzzle 3D, ...
Enye indlela yokudlala nokufunda ngezinkanyezi ukwakha le puzzle ye-3D yesistimu yeplanethi. Iqukethe amaplanethi angu-8 we-Solar System kanye nezindandatho zeplanethi ezingu-2, ngaphezu kweLanga, nezicucu ezinezinombolo ezingu-522 sezizonke. Uma iphazili isiqediwe, ingasetshenziswa njengomhlobiso. Ngokuqondene neminyaka efanelekile, isukela eminyakeni engu-6.
Thenga amaphazili e-3D
Ithebula lemidlalo eminingi
I-ColorBaby - Ithebula ...
Etafuleni elilodwa ungaba nemidlalo eyi-12 ehlukene. Inobukhulu obungu-69 cm ubude, futhi ibhodi linobuso obungu-104 × 57.5 cm. Kubandakanya isethi yemidlalo eminingi enezingcezu ezingaphezu kuka-150 nezindawo ezishintshanayo zokudlala i-pool, ibhola lezinyawo, i-hockey, ithenisi yetafula, i-chess, osheka, i-backgammon, i-bowling, i-shuffleboard, i-poker, i-horseshoe namadayisi. Ilungele izingane ezineminyaka engu-6 kanye nomndeni wonke. Indlela yokusiza ukuthuthukisa amakhono emoto, amakhono ezandla, ukucabanga okunengqondo, nokufunda.
Thenga ithebula lemidlalo eminingi
I-Mattel Scrabble Original
I-Mattel Games Scrabble ...
Kusukela eminyakeni engu-10 ubudala, lo mdlalo ungaba omunye ojabulisa kakhulu futhi ojabulisa wonke umndeni neminyaka. Ungomunye wemidlalo ehlonishwa kakhulu, ukuba namagama esipelingi ajabulisayo ukuze uthole amaphuzu aphezulu kakhulu angama-crossword ngamathayili angu-7 angahleliwe athathwa ngumdlali ngamunye. Enye indlela ngaphezu kokuthuthukisa ulwazimagama.
I-Mattel Games- Pictionary ...
Ingenye yemidlalo eyaziwa kakhulu, inguqulo yomdlalo wokudweba wakudala lapho kuzodingeka uzame ukubenza baqagele ukuthi yini ofuna ukuyiveza ngemidwebo yakho. Kufanele kudlalwe ngamaqembu, futhi kuzokuyisa ezimeni ezijabulisayo, ikakhulukazi ngalawo malungu amakhono awo okudweba angama-Picasian ...
Beat That! - I...
Ingenye yaleyo midlalo yebhodi ezokwenza ukuthi unyakaze futhi wenze zonke izinhlobo zokuhlolwa okuhlanyayo. Izinselelo okufanele uzinqobe, ngovivinyo olungenangqondo oluyi-160 lapho kuzodingeka ushaye khona, ulinganise, ugxume, ugxume, unqwabelane, njll. Ukuhleka kungaphezu kokuqinisekiswa.
Thenga I-Beat That!
Izinsuku Zokumangala-Eyokuqala ...
Omunye waleyo midlalo ethandwa ngabancane kodwa efanele umndeni wonke. Kulabo abanomphefumulo wama-adventures futhi bangene kulolu hambo lwesitimela olusheshayo benqamula amadolobha amakhulu ase-Europe kumephu enkulu lapho bezokuvivinya khona. Umdlali ngamunye kufanele aqoqe imithwalo yenqola ukuze akhe imizila emisha futhi andise inethiwekhi yesitimela. Noma ubani oqedela amathikithi endawo uyawina igeyimu.
Thenga Uhambo lokuqala
Uma uthanda imidlalo egxile ekukwenzeni uhleke, lokhu kungomunye waleyo. Dlala nomndeni wonke nabangane, ngamaleveli wamakhono ama-3 ahlukene. Kuyo kuzodingeka wenze ukulingisa okusheshayo ukuze uzame ukubenza bakuqonde, kanye ne-repertoire ebanzi enamakhadi angama-320.
I-Asmodee- Isiqhingi -...
Lo mdlalo webhodi ukubuyisela emuva ekhulwini lamashumi amabili, phakathi nokuhlola. Umdlalo wokuzidela lapho kutholwa khona isiqhingi esingaqondakali phakathi nolwandle futhi inganekwane yayo ithi ifihla umcebo. Kodwa abathandi bokuzijabulisa kuyodingeka babhekane nezithiyo ezehlukene, izilo zasolwandle, kanye ... nentaba-mlilo eqhumayo ezobangela ukuthi isiqhingi sicwile kancane kancane.
I-Carcata - Umdlalo Webhodi kanye ...
I-Carcata ixuba i-adventure namasu. Kuyo kuzodingeka ubeke isizwe sakho esiqhingini esinentaba-mlilo futhi ubonise ukuthi yisiphi isizwe esiqine kakhulu esisinda ezingozini ezitholakala kule ndawo. Vikela izindawo zakho, uqaphe ukunyakaza kwezizwe eziphikisanayo, uqhubekele phambili, uqoqe amagugu, futhi uhlale ubeke iso kumoya ovikela isiqhingi ...
Umhlahlandlela wokuthenga umdlalo webhodi wezingane
Isithombe samahhala (Umdlalo webhodi lezingane ze-Sea Battle) kusukela ku-https://torange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363
Ukukhetha umdlalo webhodi akuwona umsebenzi olula, njengoba kunezigaba eziningi nezihloko ezethulwa emakethe. Kodwa ukukhetha umdlalo webhodi wezingane kuyinkimbinkimbi nakakhulu, ngoba ezinye izici kufanele zicatshangelwe. ukuphepha kwengane:
Ubuncane obuncane obunconywayo
Imidlalo yebhodi yezingane ivamise ukuza nenkomba ye ubuncane kanye nobudala obukhulu ezihloselwe zona. Isitifiketi esibenza bavumeleke kulelo qembu lobudala ngokusekelwe kumibandela emithathu ebalulekile:
Ukuphepha: isibonelo, izingane ezincane zingagwinya izingcezu ezifana namadayisi, amathokheni, njll., ngakho imidlalo yaleyo minyaka ngeke ibe nalezi zinhlobo zezingcezu. Kubalulekile ukuthi umkhiqizo ube nesitifiketi se-CE, ukwazi ukuthi udlule izindinganiso zokuphepha ze-EU. Qaphela izinto zomgunyathi namanye amathoyizi afika evela e-Asia ngaphandle kwalezi zilawuli ...
AmakhonoAkuyona yonke imidlalo engaba yanoma yimuphi ubudala, eminye ingase ingalungiselelwa abancane, futhi ingaba nzima noma ingenzeki, futhi igcine ikhungathekile futhi iwuyeke umdlalo.
Okuqukethwe: okuqukethwe nakho kubalulekile, njengoba abanye bangase babe nezindikimba eziqondile eziqondene nabantu abadala futhi ezingabafanele izingane, noma nje iqembu elithile lobudala alikuthandi ngoba abaliqondi.
Lesi sici asibucayi, kodwa yebo kubalulekile. Kuhle ukwazi akuthandayo nokuthandwa ngumamukeli womdlalo, njengoba angathanda uhlobo oluthile lwetimu ethile (isayensi, imfihlakalo, ...), noma ukuthi ungumlandeli wefilimu noma uchungechunge lwethelevishini (Indaba yokudlala , Hello Kitty, Dragon Ball, Rugrats,…) imidlalo yayo ezokukhuthaza kakhulu ukuthi uyidlale.
Lesi sici asihlobene nje kuphela nentengo, kodwa futhi nokuphepha komdlalo (hhayi incezu ibe yizicucu ezincane ezingabangela ukuminyanisa, izingcezu ezibukhali ezibangela ukulimala ...) futhi ukuqina. Eminye imidlalo ingase ihlephule noma iphelelwe isikhathi ngokushesha, ngakho-ke lokhu kuyinto okufanele uyilondoloze.
Okunye okubalulekile wukuthola umdlalo ongena ibhokisi noma isikhwama lapho ungagcina zonke izingxenye. Izizathu zokunaka lokhu yilezi:
Ukuze ingane encane ikwazi ukuyithatha kalula ukusuka kwenye indawo iye kwenye.
Khuthaza ukuhleleka lapho umdlalo uphela ngokummema ukuthi azolanda.
Lokho kungagcinwa kalula.
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yezingane